‘कोरोनाको उच्च जोखिम छ, दशैंमा काठमाडौं छोडेर गाउँ नजानु. | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार ‘कोरोनाको उच्च जोखिम छ, दशैंमा काठमाडौं छोडेर गाउँ नजानु.
‘कोरोनाको उच्च जोखिम छ, दशैंमा काठमाडौं छोडेर गाउँ नजानु.
२०७७, २१ आश्विन बुधबार १६:३४
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना उच्च जोखिम रहेको उच्च सर्तकता उपनाउन अनुरोध गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले दशैंमा काठमाडौंबाट गाउँ जान र गाउँबाट फेरि काठमाडौं आउने काम नगर्न आग्रह गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता ज्ञवालीले अरु जिल्लामा संक्रमण नियन्त्रणमा कमी आएपनि उपत्यकामा जोखिम बढिरहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो स्वस्थ रहे चाडवाड अर्को वर्ष पनि मनाउन पाउँछौं। त्यो भएर यो कुरालाई ख्याल गरिदिनुहोला ।
यसपालिको दशैंमा अभिभावकसँग टाढैबाट आशिर्वाद लिन पनि सरकारको अनुरोध छ, उहाँले भन्नुभयो । प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले गाउँ जाँदा र फर्किँदा संक्रमण पनि सँगै जाने भएकाले यसपालि काठमाडौंबाट गाउँ नजान आग्रह गर्नुभएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले दैनिक सार्वजनिक गर्ने नयाँ संक्रमितमा आधाभन्दा धेरै उपत्यकाको भएको भन्दै उनले भने, ‘४० लाख बसोबास भएको काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना अनियन्त्रित भयो भने जोखिम बढ्छ ।
Previous articleसबै प्रकारका शिक्षण संस्थाहरूलाई परीक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति
Next articleएनआरएनए पोर्चुगलका पदाधिकारीले मान्छे कुट्न नपाउने, कुटे स्वतः बर्खास्त